ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Oral Health for Betel Nut Users by Zingo
“ ယုံကြည်မှုရှိစွာ ပြန်လည်ပြုံးလိုက်ပါ”
Ko Shwe ၏အမှတ်တံဆိပ် Zingo ဆိုသည်မှာ ကွမ်းစားသူတွေရဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးသော ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ခံတွင်းစောင့်ရှောက်မှုကုန်ပစ္စည်းများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ထုတ်ကုန်များသည် ခံတွင်းကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုဘဝကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အာရှနိုင်ငံများရှိ သန်း၆၀၀ သော ကွမ်းယာစားသုံးသူများ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို တိုးတက်မြင့်မားစေရန်။
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်သွေးမြင့်မားသည့် ထိရောက်မှုအရှိဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် ကွမ်းယာစားသုံးသူများ၏ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို တိုးတက်မြင့်မားစေရန်။
ကွမ်းယာစားသုံးသူများ၏နေ့စဉ်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် မှန်ကန်သောမျှဝေမှုနှင့်အတူ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း
နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ကွမ်းစားသုံးသူများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း
ကွမ်းဂျိုးနှင့် ထုံကျင်မှုများ လျော့ကျစေရန်အတွက် ထိရောက်မှုအရှိဆုံးထုတ်ကုန်များဖြစ်ခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယုံကြည်မှုရှိစွာပြန်လည်ပြုံးစေနိုင်ခြင်း
Ar Kar previously worked as Merchandising Team Leader at PAM Co,Ltd for 1 year. Now he is working actively at Zingo as Marketing Executive and loves what he is doing.
အမှတ် (၈၀၄) ၊ အောင်သုခလမ်း ၊
ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ။
ဖုန်းနံပါတ် : +959 894 777 153
Copyright © 2020 Zingo Myanmar All Rights Reserved. Created by